မနက်ဖြန်၏ နောင်တော်ဖြစ်တဲ့ အရှင်ဒေ၀ိန္ဒာဘိဝံသရေးပို့လိုက်သည့် ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ အားလုံး ဖတ်ကြရအောင်နော်။ ဘာတွေရေးထားလဲပေါ့........
မိမိစိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှ မေ့လို့မရသော စကားတစ်ခွန်းရှိ၏။ `` အရှင်ဘုရား မြန်မာလူမျိုးများဟာ ဆင်းရဲတာ ဟာတိုးတက်ကြီးပွားလိုတဲ့ ဆန္ဒနည်းလို့ပါဘုရား၊ ဘာကြောင့်အဲဒီလိုဖြစ်ရသလဲလို့ စဉ်းစား လိုက်တော့ `ပစ္စည်း ဥစ္စာဆိုတာ သေရင် ကိုယ့်နောက်မပါဘူး၊ ကိုယ့်နောက်ပါမှာက တရားပဲ၊ ဘ၀ဆိုတာ အနှစ်ရှာလို့မရဘူး၊အကာ သက်သက်ပါ၊ ဘယ်ဟာမှ အမြဲမရှိ၊ ချမ်းသာတဲ့လူလဲ သေရမှာပဲ၊ ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲ သေရမှာပဲ´စတဲ့ တရားတွေကြောင့်ပါ၊ ဒီတရားတွေကို နာနေရတော့ လူတွေဟာ စိတ်ဓာတ် တက်ကြွမလာပဲ တိုးတက်ကြီးပွားလို တဲ့ဆန္ဒနည်းသွားကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဆင်းရဲ ကြတာ ဘုရား´´ဟူသောစကားပင်တည်း။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်က လျှောက်သောစကား ဖြစ်၏။ မိမိစိတ်ထဲမှာ တုန်လှုပ် ခြောက်ခြား သွားပါတော့၏။ ``ဟာ ဒုက္ခပဲ၊ ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဆင်းရဲနေတယ် ဆိုပါလား၊ ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဟာ လူတွေကို စိတ်ဓာတ်ကျအောင်လုပ်နေသလို ဖြစ်နေသတဲ့၊ ဘုရား ဘုရား´´ဟု ငြီးတွားမိတော့သည်။ ထိုသူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်၏။ ယင်းကဲ့သို့ ပြောခြင်းသည် ဘုရားမြတ်စွာကို မကြည်ညိုသောကြောင့် မဟုတ်ပေ။ ဘုရားမြတ်စွာအကြောင်းကို ခရေစေ့ တွင်းကျ မသိရှိ သောကြောင့်တည်း။
``၀ီရိယ၀တော ကိံနာမ ကမ္မံ နသိဇ္ဈတိ- ၀ီရိယရှိလျှင် မည်သူ့အဘိဓာန်မှာဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်နိုင်ဆိုသော ဝေါဟာရမရှိ။ အရိုးကြေကြေ အရေခန်းခန်း ကြိုးစားသူတို့သည် ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်မှုသရဖူကို ဆွတ်ခူးနိုင်ပေ၏´´ စသည်အားဖြင့် ဟောထားသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားများ ရှိပေသည်သာ။ ထို့ကြောင့် ဘုရား မြတ်စွာ၏ တရားတော်သည် လောကီဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လောကုတ္တရာဘက်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြီးပွားတိုးတက် ဖို့အတွက် အားပေးသော တရားများဖြစ်ပါသည်။
သူဋ္ဌေးသား သိင်္ဂါလကို ဆုံးမထားသည့် မိဘကျင့်ဝတ်၊ သားသမီးကျင့်ဝတ်၊ ဆရာ့ကျင့်ဝတ်၊ တပည့် ကျင့်ဝတ်စသော ဘုရားမြတ်စွာ၏ အဆုံးအမများကိုသာ တစ်ကမ္ဘာလုံး လိုက်နာကြမည်ဆိုလျှင် ယနေ့ နိုင်ငံတကာ ပြဿနာပေါင်းစုံကို ဒိုင်ခံဖြေရှင်းပေးနေရသော ``ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဋ္ဌာနချုပ်´´တောင် လိုမည် မဟုတ်တော့ပေ။
နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်၌ အလုပ်လုပ်နေသည့် လူငယ်တစ်ယောက်က ``တပည့်တော်တို့ မြန်မာ လူမျိုးတွေက အလုပ်တူရင် ငြူဆူတယ်ဘုရား။ မနာလိုဝန်တိုဖြစ်တယ်။ အဆင်ပြေတာကို ၀မ်းမသာနိုင်ဘူး။ အချင်းချင်း ရာထူး ဂုဏ်ယှဉ်ချင်ကြတယ်။ ပြီးတော့ အောင်မြင်နေတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်အချင်းချင်း နှိမ်ချင် တယ်။ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေက တပည့်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားကို လှိုက်စားနေပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်ဖြစ်နေပြီး ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်တွေ ဖြစ်နေတာလဲ မသိပါဘူးဘုရား´´ဟု မြန်မာလူမျိုး များကို အားမလိုအားမရဖြစ်ရကြောင်း လျှောက်ထားဖူး၏။
ကျောင်းဒကာကြီး အနာထပိဏ် ကျောင်းအမကြီး ၀ိသာခါတို့ ကျောင်းတိုက်ကြီးဆောက်လုပ်ပြီး သာသနာပြုနိုင်ခြင်းသည် ဓနဥစ္စာကြွယ်ဝသောကြောင့်ပင်တည်း။ ဘုရင်မင်းမြတ်အနော်ရထာသည်သည် နိုင်ငံ တော်ကြီးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့၏။ ဘုရားပုထိုးများတည်ခဲ့၏။ ဆည်မြောင်းတာတမံများကို ဆောက်လုပ်၏။ ရှေး အခေါ် ပိဋကတ်တိုက် ၊ ယခုခေတ်အခေါ် စာကြည့်တိုက်များကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ``စာကြည့်တိုက်အစ ပိဋကတ်တိုက်က´´ဟုပင် ပြောနိုင်ပါ၏။ ယင်းသို့ တိုင်းကျိုးပြည်ပြုအလုပ်များကို လုပ်နိုင် ခြင်းသည် တန်ခိုးသြဇာ ကြီးမားသောကြောင့်ပင်တည်း။
``ခန္တီ-သည်းခံရမည်´´ဟုဆိုသော်လည်း သူ့နေရာနှင့်သူ ကျင့်သုံးတတ်ဖို့လိုအပ်လှ၏။ တိုင်းတစ်ပါး သား လူမျိုးခြား တစ်ယောက်က မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားမိန်းကလေးများကို မတရားသဖြင့်နှောက်ယှက်နေလျှင် လက်ပိုက်ကြည့်နေ၍ မဖြစ်ပေ။ နောက်နောင်မနှောက်ယှက်အောင် ရှေးဦးစွာ ပြေပြေလည်လည် ပြောဆိုရ ပေမည်။ အကယ်၍ မရခဲ့လျှင် ဖိုးသူတော်မေတ္တာပို့နည်းဖြင့် ပို့သင့်က ပို့ရပေမည်။
တခါက ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး ဖိုးသူတော်နှင့် ခရီးသွားရာဝယ် လမ်းခုလတ်၌ ကျွဲရိုင်းကြီးတစ်ကောင် နှင့် ပက်ပင်းတိုးမိ၏။ ကျွဲရိုင်းကြီးက ခတ်မည့်အမူအရာဖြင့်ပြေးလာရာ ဘုန်းကြီးက ``ချမ်းသာပါစေ´´ဟု မေတ္တာပို့လေ၏။ သို့သော် ကျွဲရိုင်းကြီးက နောက်မဆုတ်ပဲ ပြေးမြဲပြေးလာသဖြင့် ဖိုးသူတော်က အုတ်ခဲကျိုးဖြင့် ၂-ချက်လောက် ထုလိုက်ရာ ကျွဲရိုင်းကြီး ထွက်ပြေးရှာလေတော့သည်။ ထိုအခါ ဆရာဖြစ်သူဘုန်းတော်ကြီးက ``သူတော်ရေ မင်းမေတ္တာက ငါ့မေတ္တာထက် ပိုစွမ်းတယ်ကွ´´ဟု ၀မ်းပန်းတသာ မိန့်တော်မူလေသတတ်။ ဤကား ဖိုးသူတော်မေတ္တာပို့နည်းတည်း။
ဖိုးသူတော်က ကျွဲရိုင်းကြီးကို အုတ်ခဲကျိုးဖြင့် ဆုံးမလိုက်ရခြင်းသည် ကျွဲရိုင်းကြီးကို ဒုက္ခရောက်စေ လိုသော ကြောင့်မဟုတ်၊ ဆရာဘုန်းကြီးကို ကြည်ညိုလေးစားသောကြောင့်တည်း။ မည်သည့်အရာမဆို တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ရတော့မည်ဆိုလျှင် တန်ဖိုးရှိသည့်အရာကိုသာ ရွေးချယ်ရသည်မှာ သဘာဝတည်း။ ယင်း သဘာဝတရားကိုပင် ``ဓမ္မ´´ဟုခေါ်သည်မဟုတ်ပါလော။
ကမ္ဘာဦးလူများသည် စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ကိုယ့်လယ်နှင့်ကိုယ် အသီးသီး စပါးစိုက်ပျိုးကြ၏။ အစပိုင်း မှာ မည်သည့်ပြဿနာမှ မဖြစ်။ နောက်ပိုင်းရောက်လာသည့်အခါ အချောင်သမားများက စပါးများကို ခိုးကြ တော့၏။ ယင်းလောဘကား မတရားလောဘတည်း။ သို့နှင့် လူအများသည် သမာသမတ်ကျသော လူ တစ်ယောက်ကို ခေါင်းဆောင်ခန့်ပြီး ``မင်း´´ဟု သမုတ်ကာ ရပ်ရွာနယ်ပယ်ကို ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် အုပ်ချုပ် ခိုင်း၏။ သူခိုးဓားပြများကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းဖို့အတွက် (သို့မဟုတ်) မတရားလောဘသမားများကို ထိန်းချုပ် ပေးဖို့အတွက် မင်းဆိုသည်မှာ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့သည် `` ဒီလောက်ရှိရင် တော်ပါပြီ၊ ကိုယ့်မိသားစု တစ်သက်စားလို့ မကုန်ဘူး၊ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ချမ်းသာတော့ကော ဘာလုပ်မှာလဲ၊ သေရင် ကိုယ့်နောက်မပါဘူး´´ဟု စသဖြင့် လောဘနည်းသလိုလို၊ ရောင့်ရဲသလိုလိုနဲ့ ပြောတတ်ကြ၏။ တလွဲဆန်ပင်ကောင်းခြင်းပင်တည်း။ အမှန်ကား ဤကဲ့သို့ပြောခြင်းသည် လောဘနည်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်၊ အမျိုး ဘာသာကို အားမပေးလိုခြင်း၊ ဇွဲမရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ကိုယ့်မိသားစုတစ်သက် စားမကုန်လောက်အောင် ချမ်းသာနေလျှင် ကိုယ့်ဆွေမျိုး သားချင်းများကို ပေးကမ်းနိုင်သည် မဟုတ်ပါလော။ ထိုထက်မက ချမ်းသာနေလျှင် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ထောက်ပံ နိုင်သည် မဟုတ်ပါလော။
ဘုရားမြတ်စွာက ``ရောင့်ရဲရမည်၊ တင်းတိမ်ရမည်´´ဟု ဟောခြင်းသည် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို မရှာရဟု ပြောလိုသည်မဟုတ်ပေ။ တခါတရံ မတရားလောဘကြီးသည့်အခါ ``တုတ်နှင့်ပစ်လို့ရရ၊ ခဲနှင့်ပစ်လို့ရရ၊ ရဖို့သာအဓိက´´ဟု ဆိုပြီး ဒုစရိုက်မျိုးစုံ လုပ်တော့၏။ လုယက်ခြင်း၊ ခိုးဝှက်ခြင်း၊ ချောက်တွန်းခြင်း၊ တစ်ပတ် ရိုက်ခြင်းစသည်တို့ကား မတရား လောဘကြောင့်ဖြစ်၏။
ယင်းကဲ့သို့သော မတရားလောဘများကို ထိန်းပေးဖို့အတွက် ဘုရားမြတ်စွာက ``ရှိတာလေးနှင့် ကျေနပ်ရမယ်၊ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးဥစ္စာပါပဲ´´ဟု ဟောတော်မူခြင်းဖြစ် ပေသည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များကို မလုပ်ဖို့အတွက် ဟောတော်မူခြင်းမဟုတ်။
တချို့လူပုဂ္ဂိုလ်များကား လူ့ဘ၀ကြီးကို ငြီးငွေ့သည့်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို မလုပ်ချင် သယောင်ယောင်၊ ၃၁-ဘုံလုံးသည် ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည့်အတွက် နိဗ္ဗာန်တစ်ဘက်ကမ်းကိုပဲ အခုချက်ချင်း ကူးတော့မည့်ယောင်ယောင် သံဝေဂတရားရနေသည့် ယောဂီသူတော်စင်ကဲ့သို့ ပြောတတ်ကြသေး၏။ ထို ပုဂ္ဂိုလ်များ တရားရိပ်သာကိုသွားပြီး တရားအားထုတ်သောအခါ ၂-ရက်လောက် အားထုတ်ပြီး အိမ်ပြန်လာ တော့၏။ အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ ``ကျန်းမာရေးကလည်း မကောင်းဘူး၊ ဒီတော့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ် မပါတော့ ဘယ် အားထုတ်လို့ ကောင်းတော့မှာလဲ၊ တရားပြဆရာကလဲ အတွေ့အကြုံနုသေးတော့ တရား နာရတာက အားမရပါဘူးပေါ့ကွာ´´ဟု စသဖြင့် ဆင်ခြေအမျိုးမျိုးပေးပြီး ကိုယ့်အပြစ်ကို သူများပေါ်ပုံချ လေ တော့သတည်း။
အမှန်ကား အပေါ်ယံအသိလေးကို တကယ့်``သံဝေဂတရား´´ဟု ထင်နေခြင်းပင်တည်း။ ယင်းသို့ ထင်ခြင်းသည်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်နေခြင်းပင် ဖြစ်၏။ သူများအလိမ်မခံရဖို့ထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အလိမ် မခံရအောင် သတိပြုသင့်၏။
ဘက်ပေါင်းစုံကနေ မကြည့်ဘဲ တစ်ဖက်သတ်ကြည့်နေရင်တော့ အမြင်မှန်ကို ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အမြင်မှန်ကို မရလျှင် လူ့ဘ၀ကြီးကို ငြီးငွေ့သလိုလို၊ စိပ်ပုတီးနှင့်ရိပ်ကြီးခိုတော့မှာလိုလိုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များကို မလုပ်ဘဲနေလျှင် လောကီအကျိုးလည်း မရ၊ လောကုတ္တရာအကျိုးလည်း မရဘဲ ကီမဟုတ် ကုတ်မဟုတ်၊ မိနောက်မကျ ဖနောက်မမီ၊ ``အောက်ကလိအာ´´ ဖြစ်သွားမှာ စိုးရပေသည်။ (ကြက်တွန်သံလည်းမဟုတ်၊ ကျီးတွန်သံလည်းမဟုတ်သည်ကို အောက်ကလိအာဟု ခေါ်၏။)
``အလုပ်လုပ်ရင် လုပ်၊ အလုပ်မလုပ်ရင် သေတာက ကောင်းတယ်´´ဟူသော စကားပုံတစ်ခု ရှိ၏။ အသက်ရှင်သန်နေတုန်းမှာ ငွေများများရရှိအောင် အလုပ်လုပ်ရမည် ဟု ဆိုလိုခြင်းပင်တည်း။ ထို့ကြောင့် ပြော ကြသည်ထင်၏။ ``ငွေသည် ဒုတိယဘုရား´´ဟူသတတ်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားမြတ်စွာက ပစ္စုပ္ပန်ချမ်းသာရေးကိုအလိုရှိသူများအတွက် `` ဥဋ္ဌာန- မည်သည့် အလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ် ငုတ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက်ဆိုတဲ့ နောက်မဆုတ်တမ်းစိတ်ဓာတ် ရှိရမည်၊ အာရက္ခ- ကြွက်သေတစ်ခု အရင်းပြုဆိုသကဲ့သို့ အလေအလွင့်မရှိအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည်၊ ကလျာဏမိတ္တ- ဈေးကွက်ချဲ့နိုင်ဖို့အတွက် တစ်ရွာတစ်ကျီ ဆောက်ရမည်၊ သမဇီဝိတ- စီမံခန့်ခွဲမှု စာရင်းအင်းပညာကို ကျွမ်း ကျင်ရမည်´´ ဟု သမ္ပဒါတရား ၄-ပါး ကို မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဤကဲ့သို့ ကြီးပွားရေးတရားများကို သတိမထားမိကြသူများက ``ဘုရားမြတ်စွာ၏တရားသည် ကြီးပွား တိုးတက်ဖို့အတွက် ပိတ်ဆို့သည့်တရား´´ဟု ထင်မြင်ကုန်တော့သည်။
ဤအချက်ကို မိမိတို့ သံဃာတော်အရှင်မြတ်များသိရှိနားလည်ထားဖို့ လိုအပ်လှ၏။ သို့မှသာလျှင် ``ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ ဘယ်လိုတရားမျိုးကို ဟောသင့်တယ်´´ဆိုသည်ကို နားလည်မည်ဖြစ်ပေသည်။ သူ့နေရာနှင့်သူ သိရှိနားလည်ဖို့ အရေးကြီးလှ၏။ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးမှာ ညီတော် မင်းနန်ချွတ်ခန်းကို ဟောလို့ မဖြစ်။ လင့်ကျင့်ဝတ်၊ မယားကျင့်ဝတ်တရားမျိုးကို ဟောရပေမည်။ လောကီကြီးပွားရေး တရားများကိုလည်း သူ့နေရာနှင့်သူ ဟောဖို့၊ ပြောဖို့၊ ရေးဖို့ လိုအပ်ပေသည်။
တချို့ဆရာတော်များသည် ``တရားအားထုတ်ချင်သလား၊ ဘုန်းကြီးဝတ်မှ ကောင်းမှာပေါ့၊ ဘုန်းကြီး မ၀တ်နိုင်ဘူးလား၊ မိသားစု သံယောဇဉ်တွေကို ဖြတ်လိုက်စမ်းပါ၊ ဒါဆိုရင် ၀တ်နိုင်ပါတယ်´´ဟု စသဖြင့် မိန့်တော်မူကြ၏။ တချို့သောလူများမှာ ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်သောတာဝန်များ ရှိနေကြရကား တရားအားထုတ် ချင်သည့် လူတိုင်းကို ဘုန်းကြီးဝတ်ခိုင်းလို့ မဖြစ်ပေ။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အဖြစ်နှင့် တရားအားထုတ် လျှင်လည်း တရားထူးများ ရနိုင်ပေသည်သာ။
သာဝတ္ထိမြို့ကြီး၌ လူဦးရေ သန်း ၇၀-ရှိရာ သန်း ၅၀-မှာ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြ၏။ ဤအရေ အတွက်ကို ကြည့်လျှင်ပင် လူပုဂ္ဂိုလ်အများအပြား ``တရားထူးများ´´ ရကြသည်ဆိုသည်မှာ ပြောဘွယ်မရှိ တော့ပေ။ ကျန်သည့် သန်း ၂၀-ကလည်း သူတို့၏နှလုံးသားထဲ၌ ဗုဒ္ဓတရားများ ထည့်ထားကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များပင်တည်း။ ထို့ကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အရိပ်အောက်မှာ ရှိသည့် သာဝတ္ထိမြို့ကြီးသည် မည်မျှလောက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု သာယာဖွံ့ဖြိုးမှုရှိမည်ဆိုသည်ကို မှန်းဆ၍ ကြည့်နိုင်ပါသည်။ တွေးကြည့်လျှင် လွမ်းမော ဘွယ် ကောင်းလေစွာ့တကား။
လူတစ်ယောက်သည် ``ဘုရားဒကာဆိုတဲ့ နာမည်တစ်လုံးရရင်တော်ပါပြီ´´ ဟူသော စိတ်ဖြင့် ဘုရား တည်နေ၏။ အခြားလူတစ်ယောက်ကား ``သားလေးရှင်ပြုဖို့၊ လှူနိုင်တန်းနိုင်ဖို့´´ဟူသော စိတ်ဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ဇောက်ချပြီး ကြိုးစားပန်းစားလုပ်နေ၏။ ထိုနှစ်ယောက်တွင် ဘုရားတည်သောသူထက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေသောသူက ပို၍မြင့်မြတ်၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်က မွန်မြတ်သောကြောင့်တည်း။
ကျန်ရစ်သူ ကိုတံငါသည်ကတော့ နှစ်ယောက်စာရဖို့အတွက် လှေတစီးနဲ့ ချောင်းထဲမှာ ကြိုးစား ပန်းစားနှင့် ငါးများကို ဖမ်းရလေသည်။ ငါးများ နှစ်ယောက်စာရသောအခါ တံငါတဲထဲ၌ အနားယူရင်း ဥပုသ်စောင့်သွားသည့် သူငယ်ချင်းကို သတိရနေ၏။ ``အင်း ငါ့သူငယ်ချင်းကတော့ ဘုန်းကြီးထံကနေ သီလခံယူဆောက်တည် ပြီးရော့မယ်၊ အခုချိန်မှာ ဘုရားရိပ်မှာ နေပြီးတော့ ပုတီးစိပ်တရားထိုင်လုပ်နေရော့ပေါ့၊ အင်း ကုသိုလ်တွေ အများကြီး ရနေရော့မယ်၊ သိပ်အေးချမ်းမှာပဲ´´ဟု စဉ်းစားပြီး သာဓုခေါ်နေတော့၏။ လူက တံငါတဲ၌နေသော်လည်း စိတ်က ကျောင်းရောက်နေ၏။
ကျောင်းသွားပြီး ဥပုသ်စောင့်သော တံငါသည်ကလည်း ပုတီးကုံးကိုင်ပြီး ကျန်ရစ်သူ သူငယ်ချင်းကို သတိရနေမိ၏။ ``အခုချိန်မှာ ငါ့သူငယ်ချင်း ပိုက်ကွန်နှင့် ငါးတွေ ဖမ်းနေရော့မယ်၊ ဒီနေ့ ငါ့အတွက် ဝေစုပေး ရမှာဆိုတော့ နှစ်ယောက်စာ ဖမ်းရမှာ၊ ဖမ်းမှဖမ်းပါ့မလား၊ နှစ်ယောက်စာ မရရင်တော့ ဒုက္ခပဲ´´ဟု တွေးပြီး လောဘနှင့် သောကဖြစ်နေတော့၏။ လူက ကျောင်းမှာနေသော်လည်း စိတ်က ပိုက်ကွန်ထဲမှ မထွက်။
စိတ်ထားဖြူစင်အောင်နေထိုင်ခြင်းကို ``ဥပုသ်စောင့်သည်´´ဟုခေါ်၏။ ယင်းသို့ဆိုလျှင် ထိုတံငါသည် နှစ်ယောက်တွင် မည်သူက ဥပုသ်စောင့်သနည်း။ အဖြေကား လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလိုထင်ရှားလှပါသည်။ ``စိတ်သာရှင်စော ဘုရားဟော``ဆိုသည့်အတိုင်း အတွင်းစိတ်ဓာတ်က တင့်တယ်လျှင် အရာခပ်သိမ်း တင့် တယ်တော့သည်သာ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားတည်တိုင်း ကုသိုလ်ရသည်ဟု ပြော၍ မရသကဲ့သို့ စီးပွားရေးလုပ်တိုင်း လည်း တရားနှင့်ဝေးသည်ဟု ပြော၍ မဖြစ်ပေ။
တိပိဋက မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးသည်ပင်လျှင် ကိုယ့်အချင်းချင်း အားပေးကြဖို့ ကူညီကြဖို့ မိန့်မှာ တော်မူခဲ့ဖူးပါသည်။ ``သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ- ကိုယ့်အချင်းချင်း စည်းလုံးမှ အခက်အခဲမှန်သမျှ ကျော်လွှားနိုင် မည်´´ဟူသော ဘုရားမြတ်စွာ၏ အဆိုအမိန့်ကို လိုက်နာကြမည်ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် အထက် တန်းကျကျ မျက်နှာပန်းလှလှဖြင့် နေနိုင်သည်ဆိုသည်ကို မည်သည့်ဗေဒင်ဆရာကိုမျှ မေးစရာ မလိုပေ။
မည်သည့်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လုပ် ``တစ်ယောက်အား´´နှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းထက် ``ဆယ် ယောက်အား´´ နှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းက ပို၍ထိရောက်၏။ ယနေ့ခေတ်၌ နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်များသို့ သွားရောက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေကြသည့် မြန်မာပြည်သားတိုင်းရင်းသားများကို မြောက်မြားစွာ တွေ့ရှိရပေသည်။ စည်းလုံးမှု ညီညွတ်မှုသည် ယင်းကဲ့သို့တိုင်းတစ်ပါးမှာနေကြသည့်သူများမှာ ပို၍ အရေးကြီး၏။ တိုင်းတစ်ပါးတို့၌ ``အလုပ်အကိုင်၊ နေရာတိုက်ခန်း၊ အစိုးရရုံး´´စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို တွေ့ ရှိနိုင်ပေသည်။ ယင်းအခက်အခက်များကို စုပေါင်းပြီးဖြေရှင်းမှ ပို၍ အဆင်ပြေနိုင်ပါ၏။
လူတစ်ရာအတူနေသော်လည်း ``သူတစ်လူငါတစ်မင်း´´ ဖြစ်နေကြလျှင် ``တစ်ရာအား´´ မရှိတော့။ တချို့ရွာ၊ ရပ်ကွက်တို့၌ ဘာသာခြားလူဦးရေထက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူဦးရေက အဆမတန် ပို၍များ၏။ သို့သော် ဘာသာခြားတို့ကား စည်းလုံးမှုရှိရကား စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစသည်တို့၌ ဘာသာခြားတို့ကပဲ ရှေ့ကဦးဆောင် နေပါတော့သည်။ မနာလို၍ ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ အတုယူလိုသောကြောင့် ပြောရခြင်းဖြစ်၏။
ထိုအကြောင်းများကြောင့် ``အများအတွက်´´ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု တိုးချဲ့ပြီး ညီညီညွတ်ညွတ်နှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ အထူးလိုအပ်နေပါပြီ။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် တက်ကုန်ရွက်ကုန်လွှင့်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြလျှင် မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားများ မကြီးပွားစရာ အကြောင်းမရှိပေ။ ထိုကဲ့သို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ခေါ်တွင် မြတ်ဘုရားရှင်၏ အလိုဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
* (က) အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိသော ၁၀ရ မှ ၁၀၄၄ အထိတစ်ပိုင်း၊
* (ခ) အထောက်အထား များဖြင့် ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ပြောနိုင်သော ၁၀၄၄ မှ ၁၃၆၉ အထိ တစ်ပိုင်း၊
၂ ပိုင်း ခွဲ၍ ရနိုင်သမျှ အထောက်အထားများ ပေါင်းစပ်၍ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
47. မင်းဆက်(၄၇) မင်းရှင်စော
54. မင်းဆက်(၅၄)သီဟသူ (ပြည်စား)
သို့သော် မွန်ဂိုတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပုဂံပျက်ဆီးပြီးနောက် နန်းတက်ကြသည့် ပုဂံမင်းဆက်၏ နောက်ဆုံးမင်းများမှာ အမည်ခံမျှသာဖြစ်ကြပြီး အမှန်တကယ် တန်ခိုးထွားသူများမှ ရှမ်းညီနောင်သုံးဦးဖြစ်သည်။
အလောင်းမင်းတရားသည် တပ်အား၊တပ်မတော်အင်အား အားပြည့်စုံချိန်ရောက်သောအခါ မိမိ၏ အသင်းအပင်းများကို ခေါ်ယူပြီး နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရန် တိုင်ပင်တော်မူသည်။ ထိုအချိန်တွင် မွန်တပ်များ မုဆိုးဘို ကို ၀န်းရံလာသည်။ ထိုအခါ အလောင်းမင်းတရားမှ ဆွေတော်မျိုးတော် နှင့် အသင်းအပင်းများကို ခေါ်ယူ ပြီး ခုခံ ရန်တိုင်ပင်လေသည်။ အလောင်းမင်းတရား၏ လက်ရုံးတော် တစ်ဦးဖြစ်သော သီရီရွှေတောင်က "ယခုမုဆိုးဘိုမြို့ကို သူတို့ ၀န်းရံလာသည် မှာ ရှမ်း၊မြန်မာ လူအရောရော ဖြစ်သည်။ ရှမ်းနှင့်မြန်မာတို့မှာ မွန်တို့ဘက်မှ ကြိုးကြိုးပမ်းပမ်း အမူထမ်းကြမည် မဟုတ်။ မွန်တို့လည်း စစ်တိုက်ရဖန်များပြီး အင်အား ကုန်ခန်းနေကြလေပြီ။
အလောင်းမင်းတရား သည် မွန်တို့၏ ဟံသာဝတီနေပြည်တော်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ရတနာသိင်္ခသို့ ပြန်လည် ချီတက်လာသည်။ အကြောင်းမှာ မဏိပူရ ကသည်းများ အန္တရာယ်ပြုသည်ကို နှိမ်နှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ပဲခူးမြို့ကို တိုက်ခတ်စဉ် မွန်စစ်သူကြီး တလပန်းသည် လွတ်မြောက် ထွက်ပြေးကာ သံလျင်မြို့တွင် အခိုင်အမာ ခုခံနေသည်။ မြန်မာတို့က သံလျင်ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြန်သော် တလပန်းသည် ပြင်သစ်သင်္ဘောဖြင့် အိန္ဒိယပြည် ရှိ ပြင်သစ် စခန်းသို့ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ သို့သော် မုန်တိုင်းကြောင့် ထိုသင်္ဘောသည် တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းရှိ မြိတ်မြို့ တွင် ဆိုက်ကပ် ခိုလူံနေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် တနင်္သာရီသည် ယိုးဒယား တို့ သိမ်းပိုက်ထားရာ မြန်မာတို့မှ တလပန်းအား သောင်းကျန်းသူအဖြစ် ဖမ်းဆီးပေးရန် အကြောင်း ကြား ထားသည်။သို့သော် ယိုးဒယားဘုရင်ခံက ပင်လယ်၌ဒုက္ခ ရောက် ခိုလူံဝင်လာသော လူသာရှိသည် တလပန်းဆိုသူ မရှိဟု ပြန်လည် အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ထိုပြန်ကြားချက် ကို အလောင်းမင်းတရားလုံးဝ နှစ်မြို့ခြင်းမရှိ။ သို့သော် အခွင့်မသာ သဖြင့် ယိုးဒယားတို့၏ ရိုင်းပြမူကို သည်းခံ နေလေသည်။ အလောင်းမင်းတရာသည် သက္ကရာဇ် ၁၁၁၃ တွင် ရန်ကုန်မြို့ သို့ပြန်လည်ရောက် ရှိရာ ရွှေတိဂုံဘုရားပွဲတော်ကို စည်းကားစွာကျင်းပလေသည်။ ထိုနောက် သားတော် မောင်ရွ(နောင်တွင် မြေဒူးမင်း) နှင့် မင်းခေါင်နော်ရထာ( ဦးတွန်) အား လူ ၈၀၀၀ တပ်ဖွဲ့ကာ ထားဝယ်မြို့ကို သိမ်း ပိုက်ရန်စေလွှတ် လိုက်သည်။ ထားဝယ်နယ်တစ်လျှောက်တွင် ရှိသော ကုန်သည်တို့သည် မြိတ်မြို့သို့ထွက် ပြေးကြသည်။ သားတော်မောင်ရွကလည်း ခမည်းတော်အား မြိတ်မြို့ရှိ ရန်သူအင်အား မှာ မများလှကြောင်း လျှောက်ထားရာ မင်းကြီးမှ တနင်္သာရီ နှင့် မြိတ်မြို့ တို့ကို သိမ်းပိုက်ရန် အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ ယိုးဒယားတို့ စစ်တိုက်ရည် ညံ့ကြောင်း မြန်မာတို့သိသော အခါ ယိုးဒယား ပြည်တွင်း နယ်စပ်အထိ လိုက်တိုက်ရာ နယ်စပ်မြို့ များကိုပင် မြန်မာတို့သိမ်းပိုက်လိုက်မိသည်။ ယိုးဒယား ဘက်မှလည်း တပ်မတော်များစေလွှတ်ရာ သို့သော် မြန်မာ တပ်များကို မတိုက်ခိုက်နိုင်ပဲ ဆုတ်သွားရသည်။ ထိုအချိန် အလောင်းမင်းတရားကိုယ်တော်တိုင်လည်း မြိတ်သို့ ရောက်လာရာ ယိုးဒယားတို့ မြို့တော် အထိ သိမ်းပိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် တနင်္သာရီ တွင် တပ်မတော်ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းကာ ဆင်ကွန်းစစ်ကြောင်းမှ ရှေ့ဆောင် ချီတက်တော်မူသည်။ မင်းခေါင်နော်ရထာ ၏ တပ်များသည် ရပ်ဗူရီမြို့သို့ ဦးစွာရောက်သည် နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည်။ ယိုးဒယား ဘက်မှလည်း ရဲရင့်စွာ တိုက်ခိုက်သော်လည်း မြန်မာတို့ကို မနိုင်ပဲရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် အယုဒ္ဓယ မြို့တော် အထိ တပ်များကိုဆုတ်ခွာသွားရသည်။ အယုဒ္ဓယ မြို့တော်သည် မြစ်ဆုံတွင်တည် ရှိသဖြင့် မြစ်များက မြို့တော်ကို ကျုံးသဖွယ် ၀န်းရံနေသည်။မြန်မာတို့က ထိုမြစ်များကို ကူးပြီးခံတပ်များကို တိုက်ခိုက်ရသည်။မင်းတရားကြီးက တာတိုက်လင် ကွင်းပြင်ကြီးကို သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ယိုးဒယားမြို့အတွင်းရှိ တရုတ်များက တပ် ၂၂၀၀ ဖွဲ့ကာ မြန်မာတို့ကို ထွက်တိုက်လေသည်။ မြန်မာတို့က ပြန်တိုက်လေသော် တရုတ်တပ်များမှာ မခံနိုင်ပဲ တပ်ပျက်ရလေသည်။ မြန်မာတို့သည် ယိုးဒယား တို့ကို ၀န်းရံ နေစဉ် နေ့ရောညပါ အမြောက်ဖြင့် မြို့တော်တွင်း သို့ ပစ်သွင်းလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာတို့မှာ ရုတ်တရုတ်တပ်များကို ပြန်စုကာ ဆုက်ခွာလေသည်။ အမှန်မှာ အလောင်းမင်းတရားးကြီးနေမကောင်းသောကြောင့်တပ်ဆုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို ယိုးဒယား တို့က မြန်မာတို့ကြောက်၍ ပြေးပြီဟုဆိုကာ နောက်မှ လိုက်တိုက်သော် မင်းခေါင်နော်ရထာက ပြန်လည် တိုက်ထုတ်သဖြင့် ယိုးဒယားတို့ တပ်ပျက်ပြန်သည်။ ထိုစဉ် အလောင်းမင်းတရား မှာ မုတ္တမ အနီးရှိ ကင်းရွာအရောက်တွင် နတ်ရွာလားတော်မူသည်။ သို့သော်မှူးးမတ်တို့က မင်းကြီးနတ်ရွာလားသည်ကို မကြေညာပဲ နေပြည်တော်သို့ လူယုံကို စေလွှတ်လျက် အိမ်ရှေ့မင်းသား သားတော်ကြီးအား နန်းတော်ကို ထိန်းသိမ်းထားစေလျက် ရန်ကုန်ရောက်မှ နတ်ရွာလား ကြောင်း ကြေညာသည်။ နောင်တော်ကြီးလည်း ၁၁၂၂ ခုနှစ် နယုန်လပြည့်ကျော် ၉ ရက်နေ့တွင် နန်းတက်တော် မူလေသည်။ အလောင်းမင်းတရား နတ်ရွာလား ပြီး ဟု ယိုးဒယား တို့ကို နောက်ကြောင်းမှ နေပြီး ဖြည်းဖြည်း တိုက်နေသော မင်းခေါင်နော်ရထာကြားသော်သည် မြန်မာပြည်ဝင်သည်နှင့် နေပြည်တော်သို့ မ၀င်ပဲ အင်းဝ သို့ချီတက် ကာ သိမ်းပိုက် လျက်နေလေသည်။ ထိုအခါ နောင်တော်ကြီးသည် မိမိ နန်းတက်သည် နှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ပုန်ကန်မူများလည်း များလာသည်။ သို့သော် နောင်တော်ကြီးသည် ပုန်ကုန်သူများကို အောင်မြင်စွာ နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ သည်။
နန်းတက်ပြီး နှစ်နှစ်ကျော်အကြာ၊ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရောက်လျှင် တပင်ရွှေထီးမှာ နားထွင်းခြင်း၊သျှောင်ထုံးခြင်း အမှုတို့ကို ပြုချိန်ရောက်လာခဲ့သည်။ထိုသို့သောအချိန်တွင် တပင်ရွှေထီးမှာ ထူးဆန်းသော အကြံတို့ဖြစ်လာသည်။ အခြားမဟုတ်၊ ရန်သူဟံသာဝတီ မင်း သုရှင်တကာရွတ်ပိ၏ ပိုင်နတ်နေပြည်တော်အနီးတွင်ရှိသည့် ရွှေမောဓော ဘုရားရင်ပြင်တွင် ထိုနားထွင်းခြင်း၊ သျှောင်ထုံးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်လိုခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သောမှူးမတ်တို့က အလွန်ရန်များလှသည်ကြောင့် မလိုအပ်ပဲ မစွန့်စားရန် လျှောက်တင်သော်လည်း၊ ယောက်ဖတော် ကျော်ထင်နော်ရထာက ဆန္ဒရှိလျှင် သွားရောက်နိုင်ရန် ထောက်ခံပြီး၊ ရဲရင့်သန်မာသည့် သူရဲကောင်းများ ခြံရံလျက် သွားသင့်ကြောင်းလျှောက်ရာ လက်ခံပြီး သူရဲကောင်းရွေးစေသည်။ သူရဲကောင်းရွေးပုံမှာ လက်မကို ထောင်စေလျက် လက်သည်းကြားတွင် အပ်စိုက်ပြီး တူနှင့်ထုစေသည်။ လက်မတွန့်သူ၊ မျက်နှာမပျက်သူကိုသာ ရွေးချယ်သည်။ ထိုသို့စမ်းသပ်ရာတွင် တပင်ရွှေထီး၏ သူရဲကောင်း ဗလရဲထင်မှာ မျက်နှာပျက်၊ လက်တွန့်သဖြင့် အရွေးမခံရပဲ ရှက်လှရာ ဗိုက်ကို ကိုယ်တိုင်ခွဲသည်။ နောက် အူစကိုဆွဲထုတ်ပြီး ကျော်ထင်နော်ရထာ လက်သို့ပေးကာ ပြေးရာ အူဆုံးလျှင်သေလေသည်။ထိုအရာကိုမြင်ပြီး တပင်ရွှေထီးချသည့် မှတ်ချက်မှာ မြန်မာ့သမိုင်းတွင်သည့် စကားပင်။ “ငါ့ကျွန် ဗလရဲထင်မှာ မိုက်ကားမိုက်၏။သို့သော်သတ္တိမူမရှိ..။” ဟုဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် လက်ရွေးစင် သူရဲ ၅၀၀ ရလျှင် ရန်သူနယ်မြေအတွင်းရှိ ရွှေမောဓောဘုရားသို့သွားရောက်ကာ နားထွင်းခြင်းအမှုကို ရဲဝံ့စွာပြုလေသည်။ ကျော်ထင်နော်ရထာ ဦးဆောင်သည့် အမတ်လေးကျိပ်နှင့် သူရဲ ၅၀၀ ကစေတီတော် အောက်တွင်စောင့်ကြပ်ပြီး ပုဏ္ဏား ရှစ်ဦးက ရင်ပြင်ပေါ်တွင်တပင်ရွှေထီး ကို နားထွင်း၊ သျှောင်ထုံးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးလေသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်နေချိန်တွင် ဟံသာဝတီမှ သုရှင်တကာရွတ်ပိလည်း အမျက်ပြင်းစွာထွက်ကာ အမတ်ကြီး များဖြစ်သည့် ဗညားလောနှင့် ဗညားကျန်းတို့နှစ်ဦးကို တပ်များနှင့်စေလွတ်ကာ တိုက်ခိုက်စေသည်။ နားထွင်းမင်္ဂလာပြီးရာ ကိုယ်တိုင်ပင် သတ္တရုဇေယျ မြင်းကိုစီးလျက် ရန်သူတပ်ကို ကြုံးဝါးထိုးဖောက်ပြီး တောင်ငူသို့ပြန်လေသည်။ မွန်တပ်များမှာ တောင်ငူတပ်နောက်သို့ မလိုက်ဝံ့တော့ချေ။
ထိုသို့ ဟံသာဝတီမင်းသည် မိမိ၏သစ္စာရှိအမတ်ကြီးများကို အထင်လွဲကာ သတ်သည့်အကြောင်းကြားလျှင် တပင်ရွှေထီးသည် ကျော်ထင်နော်ရထာနှင့်တိုင်ပင်ပြီး ဟံသာဝတီကို အပြီးတိုင်သိမ်းပိုက်ရန် ကြည်း၊ရေနှစ်မျိုးပါသည့်တပ်မတော်ကြီးဖွဲ့လေသည်။ ကြည်းတပ်တွင်တိုက်ဆင် ၁၂၀၊မြင်းသည် ၈၀၀ နှင့် သူရဲ၇၀၀၀၀ ဖြစ်ပြီး ရေတပ်တွင် အမြောက်ကြီးတင်သည့် တိုက်လှေ ၂၀၀ နှင့်သူရဲ ၁၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။ဟံသာဝတီသို့မရောက်မှီတွင် သုရှင်တကာရွတ်ပိ လည်းအားကိုးဖွယ် အမတ်၊စစ်သူကြီး မရှိတော့သဖြင့် ယခင် အကြိမ်များကဲ့သို့ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့သည်ကို နားလည်ကာ ယောက်ဖတော် ပြည်ဘုရင်နရပတိ ထံသို့ စစ်သည် ၄၀၀၀၀၊လှေ၇၀၀ဖြင့်ပြေးသည်။ကြည်းတပ်တွင်ဆင်၂၀၀၊မြင်း၈၀၀၊သူရဲ ၂၀၀၀၀ဖြင့် ဗညားဒလ အားဦးဆောင်စေလျက်နောက်မှလိုက်စေသည်။ထိုသို့ မွန်မင်းပြေးသော် တပင်ရွှေထီး၏ တောင်ငူတပ်မှာ ဟံသာဝတီကို အလွယ်တကူရလေသည်။
ပြည်ဘုရင် မင်းခေါင်လည်း ဟံသာဝတီတပ်ကြီးချီတက်လာသည်ကိုကြားလျှင် မြို့ရိုးပြစီးများကို ခိုင်ခံအောင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ကျုံးမြောင်းခံကတုပ်တို့ကို စီရင်ခြင်း နှင့် ရိက္ခာသွင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည့်အပြင် အင်းဝမှ ရှမ်းမင်းသိုဟန်ဘွားနှင့် ယောက်ဖတော် ရခိုင်ဘုရင်တို့ထံ စစ်ကူတောင်းလေသည်။ ရှမ်းမင်းသိုဟန်ဘွားလည်း အထက်တစ်လွှားမှ ရှမ်းစော်ဘွားအပေါင်းတို့ကို စုစည်းကာ တိုက်ဆင် ၈၀၀၊မြင်းသည် ၁၀၀၀၀၊စစ်သည်အင်အား ၁၆၀၀၀၀ ပါတပ်ကြီးဖြင့် ချီလာသည်။ထိုသတင်းကိုကြားသော် ဘုရင့်နောင်သည် တပင်ရွှေထီးအား ပြည်အနီးတွင် တပ်ချနေရန်လျှောက်ထားပြီး မိမိ၏ ကြည်းတပ်ဖြင့် ရှမ်းတို့ကို တိုက်ရန် တိုက်ဆင် ၁၅၀၊မြင်း၂၁၀၀ ၊စစ်သည် ၉၀၀၀၀ ဖြင့်ချီတက်သည်။ ရှေးဦးစွာဆင်များကို အင်အားပြည့်စေ တောတွင်း၌ရေချကာ ဝှက်ထားစေပြီးကျန်တပ်များကို စစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းခွဲကာ ချီတက်စေသည်။နောက် မြင်းတပ်များကို ရှေ့မှစစ်စမ်းချီစေရာ ရှမ်းစော်ဘွားတို့လည်း ဟံသာဝတီတပ်ကို တွေ့ပြီအမှတ်နှင့် အတင်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရာ ကျန်တပ်များနှင့် တစ်ကွ တောတွင်းရှိဆင်တပ်များပါ ထွက်တိုက်သဖြင့် ရှမ်းတို့တပ်ပျက်ကာ သုံးဆယ်စား၊ရောက်ေ-ာက်စား နှင့် နောင်မွန်စားစော်ဘွားများကို ဆင်နှင့်တကွရပြီး ဆင် ၆၀ ၊မြင်း ၃၀၀၀ကျော် နှင့် စစ်သည် ၂၀၀၀ကျော်တို့ကို သုံပန်းအဖြစ်ရလေသည်။ တပင်ရွှေထီးလည်းယောက်ဖတော် ဘုရင့်နောင်ကို အားရလှသည့်အတွက် မင်းညီမင်းသားတို့၏အဆောင်အယောင်ရှိသရွေ့ကို ချီးမြင့်သည်။သို့သော် ပြည်ဘုရင်မင်းခေါင်မှာ အညံ့ခံသည်မရှိပဲ အပြတ်ခုခံကာ ရခိုင်မှ ယောက်ဖတော်၏ စစ်ကူအလာကို စောင့်လျက်ပင်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် တပင်ရွှေထီးသည် အရှေ့ဖက်မှမြို့စားရွာစားများကို ပေါင်းကာ တပ်ကြီးဖွဲ့စေသည်။ရေတပ်တွင် မုတ္တမစား လဂွန်းအိန်ကို ဗိုလ်ချုပ်ခန့်ပြီး လှေကြီး ၁၀၀၊လှေငယ်၃၀၀၊စစ်သည်၄၀၀၀၀ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ကြည်းတပ်တွင် ဗညားဦးအား တပ် ရှစ်တပ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ခန့်ကာ ဆင် ၂၀၀၊မြင်း ၂၀၀၀ ၊စစ်သည် ၈၀၀၀ ဖြင့် လည်းကောင်း ထားဝယ်သို့ချီတက်စေသည်။ထိုအခါ ယိုးဒယားတို့လည်း ထားဝယ်မှ ဆုတ်ကာ တနင်္သာရီ တွင်တပ်ချနေသည်။မော်လမြိုင်စားဦးဆောင်သည့် တပ်များ တောင်ပဘုံ ရောက်လျှင် နှစ်ဖက် အပြင်းတိုက်ရာ ယိုးဒယား မှ ကံပူရီစား ပြေးရလေသည်။ နောက် ယိုးဒယားအမတ်ဖြစ်သူ အောက်ဗြလဂွန်းအိန်မား ကိုအရှင်ရသည်။မင်းတရားရွှေထီးလည်း အောင်ပွဲရသူများကို ချီးမြင့်မြောက်စားပြီး ယိုးဒယားသို့ချီရန်တပ်မတော်ကြိးပြင်စေပြန်သည်။
ပထမဆုံး တိုက်ပွဲမှာ ကံပူရီ ဖြစ်ပြီး ယိုးဒယားမင်းကိုယ်တိုင် ဦးစီးသောတပ်မတော်ဖြစ်ကာ ဘုရင့်နောင်၏ ကြည်းတပ်နှင့်အတွေ့တွင် ဘုရင်ပြေးသဖြင့် တပ်ပျက်ကာ ဘုရင့်သားတော် နှင့် ညီတော်တို့ကို ဖမ်းမိလေသည်။နောက် အယုဒ္ဒယထိချီတက်ကာ မြို့ကို တိုက်သော်လည်း မြို့ရိုးမြင့်ပြီး မြို့ပတ်လည်တွင်ရေရစ်ဝိုင်းနေသည့်အတွက် မြို့ကို ကျအောင်မတိုက်နိုင်ဖြစ်ကာ တစ်လကြာ ၀န်းရံနေရပြန်သည်။ထိုအခါ အယုဒ္ဒယ အားနည်းစေရန် ကျန်ယိုးဒယားမြို့များကို ယူမည်ဟုတွေးကာ တပင်ရွှေထီးက ရံတပ်ကို နုတ်ကာ ကမန်ပိုက် သို့ချီလေသည်။
၁။ နိယတဗျာဒိတ်ပေးသောဘုရား - ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား
၂။ နိယတဗျာဒိတ်ပေးသောနေ့ - ကဆုန်လပြည့်နေ့
၃။ နိယတဗျာဒိတ်ရသောဘဝ - သုမေဓာ ရှင်ရသေ့
၄။ ပါရမီဖြည့် ကျင့်သောကာလ - လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း (သုမေဓာ မှ ဝေသန္တရာ ထိ)
၅။ ပါရမီတော်ဖြည့်ဘက် - သုမိတ္တာ ( ယသော်ဓရာအလောင်း )
၆။ ပါရမီတော် ကျင့်စဉ်များ - ပါရမီဆယ်ပါး၊ အပြားသုံးဆယ်၊ စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါ၊ စရိယသုံးပါး၊
၇။ ဖြည့် ကျင့် ခဲ့သောရည်ရွယ်ချက် - အများအကျိုးကိုဆောင်ရန်၊သတ္တဝါအများကိုကယ်တင်ရန်၊
၈။ ပါရမီတော် ခရီး၏နောက်ဆုံးဘဝ - ဝေသန္တရာမင်း
၉။ သန္ဓေတော်ယူမည့်ဘဝ - တုသိတာနတ်ပြည်၊ သေတကေတုနတ်သား၊
၁၀။သန္ဓေတော်ယူသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် ၆၇၊ ဝါဆိုလပြည့်၊ ကြာသပတေးနေ့၊
၁၁။ဖွားမြင်တော်မူသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈၊ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့
၁၂။ဖွားမြင်တော်မူရာဌာန - ကပ္ပိလဝတ်ပြည်နှင့် ဝေဝဒဟပြည်ကြားရှိ လုမ္ဗိနီအင်ကြင်းတော
၁၃။ဖွားဘက်တော် ခုနစ်ဦး - ကာဠုဒါယီ၊ ယသော်ဓရာ၊ အာနန္ဒာ၊ဆန္န၊ ကဏ္ဍကမြင်း၊ရွှေအိုးကြီးလေးလုံး၊ မဟာဗောဓိပင်
၁၄။နာမည်တော် - သိဒ္ဓတ္ထကုမာရ (အကျိုးစီးပွားကို ပြီးစေသောမင်းသား )
၁၆။မယ်တော်နာမည် - သီရိမဟာ မာယာဒေဝီ
၁၇။မိထွေးတော်နာမည် - မဟာ ပဇာပတိဂေါတမိ
၁၈။ကြင်ယာတော်နာမည် - ယသောဓရာ ( ဘဒ္ဒကဉ္ဖနာ )
၁၉။သားတော်နာမည် - ရာဟုလာ
၂၀။နေပြည်တော် - မဇ္ဈိမဒေသ၊ သက္ကတိုင်း၊ ကပိလဝတ်ပြည်
၂၁။နန်းစံနှစ် - သက်တော် ၁၆ မှ၂၉ ထိ ( ၁၃ နှစ် )
၂၂။နန်းမသုံးဆောင် - ရမ္မ၊ သုဘ၊ သုရမ္မ
၂၃။နိမိတ်ကြီးလေးပါး - သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်း
၂၄။တောထွက်တော်မူသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် ၉၇၊ ဝါဆိုလပြည့်၊ တနလာင်္နေ့
၂၅။ဒုက္ကရစရိယာကျင့်သောနှစ် - ၉၈ မှ ၁၀၃ ထိ ( ၆ နှစ် )
၂၆။ဒုက္ကရစရိယာကျင့်သောနေရာ - ဥရုဝေလတော
၂၇။အလုပ်အကျွေး - ပဉ္စဝဂ္ဂီငါးဦး - (၁) ကောဏ္ဍည၊(၂) ဝပ္ပ၊(၃) ဘဒ္ဒိယ၊(၄) မဟာနာမ်၊(၅) အဿဇိ၊
၂၈။ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ၊ ကဆုန်လပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
၂၉။ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူသောအချိန် - ကဆုန်လပြည့်နှင့် လပြည်ကျော်တစ်ရက်ကူးလုဆဲ၊ အာရုဏ်တတ်အချိန်
၃၀။ဗုဒ္ဓဖြစ်တော်မူသောနေရာ - ဖွားဘက်တော် ဗောဓိပင်ရင်း အပ္ပရာဇိတပလ္လင်တော်
၃၁။ဓမ္မစကြာတရားဟောသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃၊ ဝါဆိုလပြည့်၊ စနေနေ့
၃၂။ဓမ္မစကြာတရားဟောသောနေရာ - ဗာရာဏသီပြည်အနီး၊ဣသိပတန မိဂဒါဝုန်တော
၃၃။တရားဟောတော်မူသောနှစ် - ၄၅ နှစ် ( ၄၅ ဝါ )
၃၄။ နေ့စဉ်တရားဟောသောအချိန် - သတ္တဝါများအတွက်နေ့စဉ် နာရီ ၂၀ ကျော်ခန့်
၃၅။ ဟောကြားခဲ့သောတရားတော်များ - ဝိနည်း၊သုတ္တာန်၊ အဘိဓမ္မာ
၃၆။ အဆုံး အမ သာသနာတော်သုံးပါ - ပရိယတ္တိ သာသနာ၊ ပဋိပတ္တိသာသနာ၊ ပဋိဝေဓ သာသနာ၊
၃၇။ ကျင့်စဉ် ( သိက္ခာ ) သုံးပါး - သီလ ကျင့်စဉ်၊ သမာဓိကျင့်စဉ်၊ ပညာကျင့်စဉ်
၃၈။ ချမှတ်ပေးခဲ့သောလမ်းစဉ် -မဂ္ဂင်လမ်းစဉ် ( မဇ္စျိမ ပဋိပဒါလမ်းစဉ် )
၃၉။ သစ္စာလေးပါတရား - (၁) ဆင်းရဲခြင်း အမှန်တရား ( ဒုက္ခသစ္စာ )
၄၀။ နောက်ဆုံးသက်တော်၊ဝါတော် - သက်တော် ၈၀၊ ဝါတော် ၄၅၊
၄၁။ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈၊ ကဆုန်လပြည့်၊အင်္ဂါနေ့
၄၂။ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောအချိန် - အရုဏ်တက်ချိန်
၄၃။ ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူသောနေရာ - ကုဿိန္နာရုံ ပြည်၊ အင်းကြင်းဥယျာဉ်
၄၄။ တေဇောဓာတ်လောင်သောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့
၄၅။ ကြွင်းကျန်ခဲ့သောဓာတ်တော် - ဓာတ်တော် ၄ ဆူ၊ ညှပ်ရိုးတော် ၂ ဆူ၊သင်းကျစ်တော် ၁ ဆူ၊ အသမ္ဘိန္နဓာတ်တော်( မပြို မကွဲ ပကတိဓာတ်တော် ) ၇ ဆူ နှင့် အသားတော်၊
အသွေးတော်၊ အရိုးတော် တို့သည်မုန်ညင်းစေ့ ပမာဏ၊ ဆန်ကျိုးပမာဏအစိတ်စိတ် ကွဲပြီး ဓာတ်တော်၊ မွေတော် ရှစ်စိတ်( နှစ်တင်း) ခန့်ကြွင်းကျန်သည်။
( အစိတ်စိတ်ကွဲ သောဓာတ်တော် ကို သမ္ဘိန္န ဓာတ်တော်ဟုခေါ်သည်။ )
အသုံးဝင်မယ့် site များ